गर्मी मौसममा लाग्ने रोगबाट बच्न ध्यान दिनुपर्ने कुरा केके हुन् ? | Safal Khabar
गर्मी मौसममा लाग्ने रोगबाट बच्न ध्यान दिनुपर्ने कुरा केके हुन् ?
विहीबार, १३ जेठ २०७८, १३ : ४९
काठमाडौं । जेठको दोस्रो साता लागेसँगै देशभर गर्मी बढेको छ । कोरोना कहरकाबीच यस पटकको गर्मीमा अन्य वर्षमा झै धूलो तथा अन्य प्रदूषण कम छ ।
यो मौसममा शरीरलाई तातो बनाउन वा शरीरको तापक्रम ३७ डिग्री सेन्टिग्रेडमा राख्न हामीले धेरै शक्ति खर्चिनु पर्दैन । गर्मी मौसममा बढी प्रोटिनयुक्त खानेकुराहरू अर्थात कार्बोहाइड्रेड, बोसोयुक्त खाना भन्दा भिटामिन, खनिज तथा प्रसस्त पानी भएका खानेकुरा खानु पर्दछ ।
यो मौसममा सकेसम्म फलफूल, सलाद, दही, काँक्रा भोजनमा समावेश गर्नु पर्दछ । यो मौसममा मासु, अण्डा, दूध तथा दूधका परिकार रोज्नु राम्रो होइन । साथै बढी मसालेदार वा चिल्लो खाना खानु हुँदैन ।
गर्मी मौसममा झाडापखाला, बान्ता, पेट दुख्ने र फुड प्वाइजनिङ हुने क्रम बढ्दो हुन्छ । त्यसैले यो मौसममा ठिक्क मात्रामा खाना पकाउनु पर्छ ताकी खाना बासि नहोस् । खानेकुरा भण्डार गर्दा फ्रिजको प्रयोग गर्नु पर्छ । पानीको प्रयोगमा पनि विशेष ख्याल गर्नु पर्दछ ।
गर्मीमा अनिवार्य पानीलाई उमालेर, फिल्टर ९छानेर० गरेर वा औषधि प्रयोग गरेर मात्र पिउनु पर्दछ । त्यस्तै खाना खानुअघि राम्रोसँग हात धुने, खाना पकाउनु तथा पस्कनुअघि हात धुने, दिसा तथा पिसाब गर्न चर्पीको प्रयोग गर्ने, शौचालय गएर आइसकेपछि राम्रोसँग हात धुने बानी बसाउनु पर्दछ । जो कोरोनाबाट बच्न पनि उपयोगी हुन्छ ।
गर्मीमा रोग फैलाउने कारक झिङ्गा, लामखुट्टे, भुसुनाको वृद्धि रोक्नु पर्दछ । डेंगु, मलेरिया, इन्सेफ्लाइटिस लामखुट्टेबाट फैलन्छन् भने कालाज्वर भुसुनाको टोकाइबाट फैलिन्छ । तसर्थ यिनिहरुको वृद्धि रोक्न र टोकाइबाट बच्न विशेष सावधानी अपनाउनु पर्दछ । एजेन्सीको सहयोगमा